वी’र्य दानबाट जन्मिएकी युवतिले खोजेर भेटाइन आफ्ना ६३ भाइ बहिनी ! – Sapana Sanjal
वी’र्य दानबाट जन्मिएकी युवतिले खोजेर भेटाइन आफ्ना ६३ भाइ बहिनी !
July 16, 2021 193
Sapana Sanjal : अमेरिका निवासी कियानी एरोयो एउटा खास मिसनमा छिन । वी’र्य दान बाट जन्मिएकी उनले आफू माथि घटेको एउटा घटना पछि आफ्ना दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू खोज्ने निर्णय गरिन । उनी समलिङी जोडी की सन्तान हुन ।
कियानीले एउटा कम्पनीको लागी स्पर्म डोनरको विज्ञापनमा काम गर्ने मौका पाइन , उनलाई देखे पछि उनका बाबुले पनि मन बादले र आफ्नो प्रोफाइल सार्वजनिक गरे । १८ वर्ष पुगे पछि उनी आफ्नो बाबु सँग भेट गर्न सक्ने भइन । १८ वर्ष नपुग्दै उनी आफ्ना भाइ बहिनी खोज्न सक्ने भइन । उनले स्पर्म बैङ्क सँग रेकर्ड लिएर आफ्ना भाइ बहिनीको खोजी गर्न थालिन ।
अहिले मैले ६३ जना दाजुभाइ दिदीबहिनी लाई भेटाइ सकेकी छु । उनीहरू क्यानडा , अमेरिका , अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड सम्म फैलिएका छन् । मेरो सहर फ्लोरिडामा मात्रा हामी १२ भाइ बहिनी छौ । संक्रमण प्रभाव सकिए पछि फेरी एक पटक भाइ बहिनीको खोजीमा निस्कने बिचार छ ।
Prevपसलमा गएको यो बाँदरले धमाधम र क्सी को बोतल खोल्दै आफै पिएपछी….
Nextआँकका २ पात जसले च्वाट्टै पर्छन सुगर अर्थात् मधुमेह !
विवादित बन्दै गएपछि हिजोको आजै ओली सरकारले चाल्यो यस्तो कदम
काँग्रेस नेता भण्डारीले रुपन्देहीमा कार दुर्घटना हुदा गुमाए डाक्टर भाई
जसपा र माधव नेपालको समेत सहयोगमा सरकार बनाउने कांग्रेसको निर्णय
खाली भयो काठमाडौ, एकै दिन ५ लाखले उपत्यका छोडे